Dhibaatada Qaadka oo laga hadlay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Jaamacadda Bariga Africa qaybta magalada Qardho ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka kala duwan uu Qaadka gaysto, waxana kasoo qayb galay mamulka magalada, Culimo, Odayaal dhaqan, haween, Gudoomiyaha La-dagalanka Qaadka iyo ardayda Jaamacadda.
Bilowgii kulanka waxaa ka hadlay Gudoomiyaha Jaamacadda Bariga Africa Qardho Sheekh Cali Maxamed Cali Hure, wuxuna sheegay inuu ku faraxsan yahay markii ugu horaysay Jaamacadda lagu qabto kulan looga hadlayo dhibaatooyinka uu Qaadku ku hayo dadka Soomaaliyeed iyo sida loogu baahan yahay in laga hortago, wuxuna Sheekh Hure sheegay inay garab taagan yihiin Olalaha la-dagalanka Qaadka.
Col.Yaasiin Cumar Dheere oo ka mid ah Odayaasha magalada Qardho ayaa soo jeediyay in dhalinyaradda ku nool magaalada Karkaar ay fariinta la-dagalanka Qaadka qaataan, isla markasna ka wacyi geliyaan dadka cuna iyo kuwa ka ganacsada, wuxuna muujiyay inuu saamayn ku yeeshay caafimaadka dadka iyo dhaqaalahooda.
Duqa Degmada Qardho Maxamed Siciid Ciise Hoggaama-laroor ayaa tilmaamay in Qaadka uu leeyahay dhibaatooyin kala duwan, bulshadana looga baahanyahay inay iska daayaan.
Hooyo ka mid ah kuwa qaadka ku gada magalada Qardho oo la yiraahdo Fartuun ayaa sheegtay inay faraha kala baxday Iibinta Qaadka, ayna soo gadaysay mudo 19-sano ah, waxayna Fartuun ugu baaqday Haweenka kale ee Qaadka gada inay isaga soo baxaan oo ay ku badashaan iibinta waxyaabaha kale ee khayrku ku jiro.
Ugu danbayntii Gudoomiya la-dagalanka Qaadka Abuukar Cawaale “Qaad-diid” ayaa sheegay wacyi galinta la-dagalanka Qaadka inuu gaarsiinayo gobalada Maamulka Puntland, ayna muhiim tahay shacabka Qardho inay ka qayb qaataan wacyi galintan oo ay la-dagaalamaan in gudaha magalada lagu dhex gado qaadka.
Cawaale wuxuu xusay mamulka iyo Ardayda Jaamacadaha inay xuseen maalinta loo qorsheeyay inay noqoto maalinta la-dagalanka Qaadka, taasoo ku beegneyd 25-ka bisha Febraayo, isagoo sheegay in sanadkasa maalintaasi oo kale la soo bandhigi doono dhibaatooyinka qaadka iyo horumarka laga sameeyay in laga hortago.